Bahlsen Oetker & Co. KG မှအတင်းအဓမ္မအလုပ်သမား
19 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 အိုလီဗာ Bienkowski
စေးကပ် post ကို By အိုလီဗာ Bienkowski On 19 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2018
အညိုရောင်ဘီစကွတ် - အစာကြေဖို့ခက်ခဲ
အားဖြင့် #PixelHELPER သုတေသန # ဖက်ဒရယ်မော်ကွန်းတိုက် ရမယ် #Wikipedia Hans အားဖြင့်ဆောင်းပါး #Bahlsen ပြန်ရေးနိုင်ပါတယ် သူသည် ၁၉၄၄ ခုနှစ်အထိဒုတိယအထွေထွေကွပ်ကဲမှုဌာန၌ကာကွယ်ရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်အမှုထမ်းခဲ့သည်။ နာဇီများအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခဲ့သည် #Zwangsarbeiter ယူကရိန်းရှိစက်ရုံများ #VerenaBahlsen
ထိုအဖြစ်အပျက်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရော့ခ်ကြယ်ပွမှာအသွင်အပြင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်သွား၏။ ရုတ်တရက် Bahlsen ရဲ့ swagger ၏ဝေဖန်မှုတစ်မဲမှောင်မှတ်ချက်ခဲ့: မိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏သမိုင်းဤမျှဂုဏ်ယူသူသည်အဆိုပါအမှေစား, ၎င်းတို့၏ဥစ္စာဓနနှင့်နာဇီစစ်အစိုးရ၏သားကောင်များ၏ခေါင်းပုံဖြတ်ကြွေး။
အခါ ရုပ်ပုံ- အမွေဆက်ခံသူကအကြောင်းမေးသော် - သူမအလွန်နှေးကွေးစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သူက“ ကျနော့်ဟောပြောချက်ကိုသူနဲ့တွဲဖို့အဆင်မပြေဘူး” ဟုပြောသည်။ သူကဒါကိုနည်းနည်းမှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မည်။ ၄ င်းကိုပြောဆိုလိုသောသူကိုဤသို့ပြောခြင်းသည်မမျှတပါ။ စီးပွားရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရှေ့သို့ရွေ့ရန်“ မော်တော်ယာဉ်” ဖြစ်နိုင်သည်။
“ ဒါကကျွန်တော့်အချိန်မတိုင်ခင်ကတည်းကပဲ၊ ကျွန်မတို့ဟာအတင်းအကျပ်အလုပ်သမားတွေကိုဂျာမန်တွေလိုပဲပေးပြီးသူတို့ကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့တယ်။ တရားရုံးကတောင်းဆိုမှုများကိုပယ်ချခဲ့သည်။ ဒီကနေ့ Bahlsen ကိုမကျေမနပ်ပြောဆိုမှုများမရှိတော့ပါ။ Bahlsen ဟာဘာအပြစ်မှမရှိဘူး။
ထိုတစ်ကယ့်ကို Bahlsen ဤအချိန်ကယ့်ကိုကိုယ့်ကိုတောင်အပြစ်တင်နိုင်ပါတယ်ရှိရာအိမ်သာကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ အတော်လေးဆိတ်ကွယ်ရာကနေ ...
တစ်ဦး Bahlsen စက်ရုံအနေဖြင့်အသတ်ခံအတင်းအဓမ္မအလုပ်သမား။ မရှိတော့အလုပ်လုပ်နိုင်သူကိုအတင်းအကျပ်လုပ်သားများမှဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ သူတို့ကအာရုံစူးစိုက်မှုစခန်းများတွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
စာနယ်ဇင်းဓာတ်ပုံဆရာ Dirk-မာတင် Heinzelmann
deportiere အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ချွေးတပ်စခန်းမှ Bahlsen ထံမှအလုပ်သမားအတင်းအဓမ္မထားပြီးသူကားအဘယ်သူ: ပိုစတာ Wanted? စာနယ်ဇင်းဓာတ်ပုံဆရာ Oleg Rostovtsev
ထိုအခါမူကား Bahlsen ဆက်လက်။ ထိုဤကဲ့သို့သောတံပိုးမှုတ်သောအခါ:
... ကုမ္ပဏီ၏သောလုပ်သားများကိုမကျင့်ဒါ ကြီးမားသော သူကိုနောက်မှစောဒကတက်လျှင်ကုသခဲ့ကြပေမည် ...
... နှင့်ကဘာlsenတရားရုံးက၎င်း၏ပြစ်မှုများများအတွက်ကန့်သတ်ပညတ်တော်အဘို့အကုမ္ပဏီကို run ကြောင့်သာ "ဘာမှအပြစ်ရှိသည်မဟုတ်" ကြောင်းဆိုရန်ရဲဝံ့ အရှုံးခံနိုင်ဘူး...
... က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အတိတ်နှင့်အတူဒါကိုင်တွယ်ရန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာအရသာမရှိသောမလွယ်ကူပါဘူးလား ကသာနောင်တနည်းနည်းတက်ပြသနိုင်ဖို့, Bahlsen ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ အဲဒီအစား, သူတို့နာဇီစစ်အစိုးရအတွက်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုကိုဆင်းကစားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကုမ္ပဏီ Bahlsen အပတ်စဉ်ထုတ်“ Die Zeit” သတင်းစာ၏ဖော်ပြချက်အရသူ၏အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးများသည်နာဇီခေတ်တွင်လုပ်ခလစာထက်နည်းပါးစွာပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် သတင်းစာသည် ၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်များကကွတ်ကီးထုတ်လုပ်သူ၏လုပ်အားခကတ်များကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီအမွေဆက်ခံသူ Verena Bahlsen သည် "Bild" သတင်းစာတွင်နာဇီတို့၏အတိတ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အတိတ်ဖြစ်ရပ်များရှိသည်။ downplayed။ “ ကျွန်တွေကိုကျွန်ပ်တွေကိုဂျာမန်တွေလိုပဲပေးပြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိသူမသည်သူမ၏ရွေးချယ်မှုအတွက်တောင်းပန်ခဲ့သည်။
ပိုလန်နှင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှအတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းသူများသည်တစ်ပတ်လျှင် Reichsmarks ၅ မှ ၁၀ ခုကြားရကြသည်ဟု Zeit အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၂၃ မှ ၂၉ အတွင်းရှိ Reichsmarks အကြားစုစုပေါင်းလုပ်ခ၏အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုအခွန်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးအထောက်အပံ့များ - ဤအမျိုးသမီးများမှမည်သည့်အကျိုးအမြတ်မှမခံစားရသော်လည်း - စခန်းအတွင်းရှိအတင်းအဓမ္မနေရာထိုင်ခင်းအတွက်ဒဏ်ငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားမှုတို့ကိုလည်းတားဆီးထားသည်။
အစီရင်ခံစာအရသို့သော်နာဇီခေတ်ကဂျာမန်အလုပ်သမားများ၏လုပ်ခနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ မော်ကွန်းတိုက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ် ဦး က Zeit သို့ပြောကြားခဲ့သည် -“ သမိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနအရဂျာမန်လုပ်သားများသည်ပျမ်းမျှလုပ်အားခ ၄၄ ခွန်းခန့်ရရှိသည်။
အဆိုပါ Bahlsen Group မှယခုအထိဒီခြားနားချက်အပေါ်အထူးမှတ်ချက်ပေးရန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
Der Spiegel က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ပြဿနာအတွက်သတင်းပေးပို့သကဲ့သို့, မိသားစု Bahlsen ယခင်ကလူသိများထက်နာဇီစစ်အစိုးရအတွင်းနာဇီခေတ်ကာလအတွင်းမှာလည်း Hanover အတွက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ Verena Bahlsen ရဲ့အဘိုးတို့နာဇီပါတီနှင့်အက်စ်အက်စ်၌မိမိညီအစ်ကိုတို့ကိုရာထူးတိုးပါပြီ။
der #Wehrmacht #Keks, အဆိုပါ # Krümelmonster #VerenaBahlsen ၏ Bahlsen အဆိုပါရန်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာ% 40 သင့်တယ် #Konzentrationslager#Auschwitz ထံပေးအပ်။ #OhneMampfkeinKampf & #ohneFeldpostkeineKampfmoralWehrmacht သံသံကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းဝိုင်းရံပိတ်ဆို့မှုများနှင့်လျှပ်စီးစစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Bahlsen ကိုဆန့်ကျင်သောအလင်းရောင်အတွက် paypal@pixelhelper.tv Der သို့လှူဒါန်းပါ #Leibniz Verena Bahlsen ကုမ္ပဏီကဘီစကွတ်စစ်ပွဲအဘို့ဤစနစ်နှင့်အဆုံးအဖြတ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုမပါဘဲပါလိမ့်မယ် #Stalingrad အစောပိုင်းကပြီးစီးခဲ့ပြီး။ အဖြစ်အဆိုပါကုမ္ပဏီ Bahlsen ဝံ #Temmlerယင်းကြောင်း #Hitler မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရေး၏စစ်မှ Coke အကြီးအကြွေးမြီထုတ်လုပ်ပါပြီ #Nazis တတိယ Reich ၌တည်၏။ အဆိုပါ Bahlsen 1500 €လျော်ကြေးငွေမကောင်းတဲ့ဟာသဖြစ်ပါသည်တစ်ကြိမ်ပေးဆောင်သည့်အတင်းအဓမ္မအလုပ်သမားရှိပါတယ်။ Bahlsen အဆိုပါလိုက်ဘနိဇ် Feldpostkarten, ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းမျက်နှာစာဆက်သွယ်ရေး၏အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူဖြစ်သည်။ #Kriegspropaganda ယနေ့ #Reklamekunst #DasOriginal# Nurechtmit52Zähnen #Vernichtungslager #eiserneRation #Hannover#Kriegstreiber မဟာမိတ်ဗုံးကြဲမိန်းမများအတင်းအဓမ္မအလုပ်သမား raids လိုက်တဲ့အခါသစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပဲအမိုးအကာ, ၏ဒဏ်ငွေလူကြီးလူကောင်းမည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည် #Bahlsen သင့်ရဲ့န်ထမ်းမဟုတ်ပင်ရှိခဲ့ #Bunker တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါက၏လူမဆန်အရင်းရှင်ပုံရိပ်ကိုပြသ #Nazi နောက်လိုက်မိသားစု။ ဤသို့သောမိသားစုများမှသာနာဇီများသည်သူတို့၏ဖျားနာမှုစနစ်ကိုလုံးဝထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ငါတို့ Bahlsen ကိုငါတို့ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာပြကြပါစို့။ သို့သော်သင်၏ရှယ်ယာ ၄၀% ကို #Auschwitz သို့လှူဒါန်းရန်လိုသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းထံတောင်းခံပါ။ ၎င်းကို Facebook တွင်သင်ရှာနိုင်သည်။ https://web.facebook.com/verena.bahlsen & Instagram @verenabahlsen
Oetker, Bahlsen & Co. ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေသည်
ဆီးရီးယားဖို့စစ်တပ်က IS စစ်တိုက်သွားနှင့်ကမ္ဘာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ခရစ္စမတ်စျေးကွက်ကိုကြောက်ပေမယ့်သူဌေးဂျာမဏီရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကကုမ္ပဏီများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်။ ဒါကြောင့်မကြာသေးမှီကဒေါက်တာအချို့ရှယ်ယာရှင်များရှိ သြဂုတ်လ Oetker ကီလိုဂရမ်အဘယ်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလယ်ကွင်းရုံဂျာမန်တိုက်လေယာဉ်များပါဝင်သည် ESG Elektroniksystem- နှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး GmbH သည်များ၏ဝယ်ယူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်။ အဆိုပါလက်နက်စက်မှုလုပ်ငန်းတခါတရံခက်ခဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်မဟုတ်အနည်းဆုံးများစွာလက်နက်တင်ပို့မှုနှင့်စစ်ရေးမစ်ရှင်အသုံးပြုပုံပေမယ့်ထင်လုံခြုံရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, လုံခြုံခြင်းကိုခံရဖွယ်ရှိပေမဲ့လည်းများစွာသောအသွေးကိုတက်ကပ်။
pixel ကူညီသည့်အသံတိတ်ထွန်းအတွက် Oetker မိသားစုကဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်နှိုက်ကသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ခရစ္စမတ် cookies များကိုများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများဝယ်ယူဒီနည်းနည်းငြိမ်းချမ်းသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုမသှားပါဘူးအခါအလုပ်များ Pre-ခရစ္စမတ်ကာလ, Bienkowski အမျိုးမျိုးသောဆန္ဒပြလုပ်ရပ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အလင်းအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူဒေါက်တာဥပမာ projected shell ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် Dr. ၏ကုမ္ပဏီ၏မျက်နှာစာဖို့လက်မှတ် "အမြောက်များစာကျွေးခြင်း" တွင် Oetker လိုဂို Bielefeld အတွက် Oetker ။ ဒါဟာပွဲတော်အလှဆင်လမ်းများတက် lit သောညဥ့်ကောင်းကင်ပြာ Bielefeld ့အနည်းငယ်ထပ်မံအလင်းခဲ့ကြပေမည်, ဒါပေမယ့်ဒီမှာမီဒီယာအာရုံစိုက်မှုအကြောင်းပါ။ ဒါဟာ Bienkowski Jorge Sprave တစ်ဦးအိမ်လုပ် pudding အမြောက်များနှင့်အတူ YouTube ပေါ်မှာနာမည်ကြီး Slingshot Channel ကိုအပေါ်စမ်းသပ်ပြီးဒီသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်တုံ့ပြန်မှုကဒီအရာခပ်သိမ်းကိုချွတ်ဖြစ်ပေါ်? ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ပု Bielefeld ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကကြေညာချက်ထိုအချိန်အတောအတွင်း၌ရှိ၏။ "ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသက်သက်သာနှစ်ခုမိသားစုဝင်များအကြားတစ်ဦးပုဂ္ဂလိကကိစ္စနှင့်ကုမ္ပဏီဒေါက်တာနှင့်အတူဘာမျှရှိပါတယ် "Oetker သလား, တကသတင်းစာအစီရင်ခံစာ, အ Neue Westfälischeသတင်းစာအရသိရသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ Bienkowski မိမိတို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်အောင်မြင်ရန်ဖို့ Oetker မိသားစုမှလာမယ့်ထိုးနှက်လက်မှလုယူ။ ဒါကြောင့်ဒေါက်တာ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ရှင်အဖြစ်ရှိမရှိမေးခွန်း Oetker လက်နက်စာချုပ် mitzumischen မကြားရဤအချိန်မြိန်စွာမေးသော်နှင့်ဘာလင်ယောက်ျားလေးများ '' choir နေဖြင့်လုံးဝအရသာမရှိသောခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် "ဟုအဆိုပါကိတ်မုန့်လက်နက်များခုနှစ်တွင်" ဟုအဆိုပါလူမှုရေးအရအရေးပါ ado "ခရစ္စမတ်ကိတ်မုန့်များတွင်" Rolf Zuckowskis Backhit မှ။ အမြိုးသားတို့ Oetker မိသားစုဖြစ်ပါတယ်မေးဖို့: "? ဘယ်မှာရှိကငျြ့တရားသွားပြီ" ဟုအဆိုပါဘာလင် HipHop အနုပညာရှင် Vokalmatador နှင့်အတူအရေးယူ Shit တင်ပြခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ သို့သော်မသာကျယ်ကျယ်လောင်လောင်နှင့်တင်ဆက်မှု၏အကြောင်းအရာကိုကမ်းလှမ်းရန်အများကြီးရှိပါတယ်, ထို့အပြင်ထုတ်လုပ်မှုသဘောတူ။ 1,45 မီတာရှည်လျားသစ်သားသေတ္တာတော်ရှေ့မှာဝက်မျက်နှာဖုံးများနှင့်အတူ။ အရသာမရှိသောဒီနောက်ခံအနည်းဆုံးရစ်ချတ် Oetker ဝမ်းမြောက်သောစိတ်လက်နက်စာချုပ်ဖို့လွန်သွားသင့်ပါတယ်။ ပြီးနောက်အားလုံး, ဒီအဆုံး 1976 ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌ပြန်ပေးဆွဲခံရခြင်းနှင့်ထောင်ချခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါပြန်ပေးဆွဲတဲ့ဝက်မျက်နှာဖုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ action ကိုအရသာမရှိသော အကယ်. ? ဆက်ဆက်။ ဒါပေမဲ့ချောမုန့်ဖုတ်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်အတိတ်မေ့လျော့ရန်နှင့်လက်နက်အပေးအယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ကြာပေါင်းဘော်ရောနှောဘယ်လောက်နီးပါးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သေလုနီးပါး 40 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ရဖို့သေချာ?
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုအော်ဟစ်အတူ ပူးပေါင်း. စီမံကိန်းဆော်ဒီအာရေဗျ pixels ကိုကူညီပေးဖို့အကြံပေးအဖွဲ့ပို့ကုန်တစ်ခုချက်ချင်းရပ်တန့်ဘို့ - ဖက်ဒရယ် Chancellery နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျသံရုံးပေါ်ရှိ "ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှကျေးဇူးတင်ပါသည်မျှမတင့်ကား" စကားလက်နက်ကုန်သွယ်မှုရပ်တန့်။
အဆိုပါဆော်ဒီဂျာမန်လက်နက်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏အရေးအပါဆုံးဖောက်သည်များအကြားနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ ပထမနှစ်ဝက်အတွင်း 2015 လက်နက်တင်ပို့မှုတန်ဖိုးရှိအတည်ပြုပြီဆော်ဒီအာရေဗျမှနီးပါး 180 ယူရိုသန်း - ဗြိတိန်နိုင်ငံကအမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးနှင့်အတူ ပို. ပင်ကျယ်ပြန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့ကြသည်။
ဂျာမနီလက်နက်တင်ပို့မှုအတွက်ဥရောပချန်ပီယံဖြစ်ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်ရုရှားပြီးနောက်တတိယလိုက်တယ်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရဂျာမန်လက်နက်နှင့်စစ်သုံးပစ္စည်းများ၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူလည်းထိုကဲ့သို့သောဆော်ဒီအာရေဗျအဖြစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့အာဏာရှင်အစိုးရများပေးနေကြသည်။ ဤသည်ကိုဆက်လက်မပေးရပါမည်။ ငါတို့သည်သေမင်းအဆုံးသတ်ရေးနှင့်အတူစျေးဆိုင်သတ်မှတ်ထားချင်တယ်။
Bahlsen Oetker & Co. KG မှအတင်းအဓမ္မအလုပ်သမား ဧပြီလ 21st, 2020အိုလီဗာ Bienkowski